Mabhuku matanhatu nevanyori kubva kuReal Sitio uye Villa de Aranjuez. 6st kuburitsa. | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Novela, Romance novel, Nyaya
Ndanga ndichigara mukati Aranjuez. Iyo Chaiyo Sitio y Villa del Sur muRuzhinji rweMadrid ndeye guta rakanaka nerunako rwese rweguta iro, panguva imwechete, oozes nhoroondo uye hunyanzvi Kwese kwaunoenda. Uye nehunyanzvi hwakawanda hapana kushaikwa kwenyaya dzakanaka uye vanyori kuti uverenge. Nhasi, mune kutanga kuendesaIni ndinotarisa mamwe vanyori vemazuvano erwizi kana vanyori vanogara nemabhuku ake. Uye ini ndinotora mukana ku koka munhu wese kuti ashanyire Aranjuez.
1.1 Ngano dzinonakidza dzeAranjuez
2.1 Chitsauko chekupedzisira
2.2 Shinga kutarisa
3.1 Guta reFortuna II. Wood clover
4.1 Zvakavanzika nemadota
4.2 Kuvhima varoyi
Uyu munyori akazvarwa muna Madrid en 1985 es aimbova mutambi wepamusoro. Mushure mekurega basa, akazadzisa kurota kwake semunyori neiyi yake bhuku rekutanga iyo inogara muguta rako rekugara.
Ngano dzinonakidza dzeAranjuez
Mwanakomana XNUMX pfupi uye inonakidza ngano dzechakavanzika uye chinotyisakunyangwe zvisiri kubva pazviitiko chaizvo. Kwayakabva kune ngano uye nyaya dzinotaurwa nekufamba kwenguva kuti munyori akafungidzira kana kugadzira. Semuenzaniso, pane imwe kubva mungano yeScotland iyo López Medina yakashandura kumuzinda weMedinaceli de Aranjuez. Nenzira, anotidzidzisa iyo nzvimbo zhinji dzekufananidzira kubva kuguta. Zvakare, pakupera kwebhuku, tinosangana nevamwe zvikamu gumi nezvitanhatu uko munyori anotsanangura kwazvakabva pfungwa, hwaro zvitubu kana kana iyo nyaya iri chibereko chemafungiro ako.
Akazvarirwa mukati Madrid en 1963 y anogara muAranjuez. Iye ane degree muJogirafi uye Nhoroondo uye anoshanda se purofesa kuMaestro Matías Bravo de Valdemoro Sekondari Dzidzo Institute.
Justina ona kuti hupenyu hwako hwakamonyaniswa sei ne ramba kutengesa mimwe mifananidzo Romanesque iyo yeguta kwaakaberekerwa uye achigara. Ndokusaka achizofanira kuenda akadzingwa. Iye achazoda kuona vana vake zvakare, asi ivo vanomuramba nekuti ivo vanotenda kuti vasiiwa. Iyo novel inoenderera ne nhoroondo yezvizvarwa zvitatu zvemhuri izvoiyo yakaratidzirwa nehermitage, Mutsvene Baudelio weBerlanga, yako pendi nevanhu vayo.
Iri bhuku rakagadzirwa ne ngano gumi nenhatu dzinotaura nyaya gumi nenhatu dzinomutsa yakatungamirwa nekapfupi kutaura pamusoro pebasa ravakafemerwa. Imwe nzira yekuona hunyanzvi pane kuidzidza kana kuinakidzwa pasina kunyepedzera. Tarisa kunze kwaro, kana senge iyo nyaya iyo inoda kutariswa kwedu kuti isu tigone kuiona ichizaruka.
Akazvarirwa mukati Madrid en 1983 anogara muAranjuez. Anozvitsanangura achizvifarira nenyaya dzechokwadi nedzenhema uye akatoburitsa mabhuku akati wandei.
Guta reFortuna II. Wood clover
Guta reFortuna Ndicho chakavanzika uye fungidziro akateedzana iyo yakaratidza nyika inotongwa nemhanza. Asi protagonist, Alexander Berkel, inozove jinx. Crystal dice ndiyo yaive vhoriyamu yekutanga umo Alexander aifanirwa kuferefeta nyaya yekumwe kufa.
Wood clover ndiye yechipiri vhoriyamu yezvikamu uye anotanga mwedzi minomwe mushure meiyo yapfuura. Nguva ino Alexander ndinofanira kutarisana ne migumisiro yezviitiko izvozvo, asi mamiriro avo ezvinhu achinja zvachose. Uyezve, anoramba achiongorora yake Zita uye iyo mwana kurasika.
Mutori wenhau zvese muzvinyorwa zvakanyorwa neredhiyo. Yaro inopfuura makore gumi nemashanu mune chikamu chemudunhu reMadrid chepepanhau Nyika, uye inopfuura makore makumi maviri neshanu en redhiyo. Ndipo paakatanga basa rake redhiyo muredhiyo yemuno yeguta rake, Aranjuez.
Kubva 2012. Yaiva yake yekutanga novel rakabudiswa, izvo zvinotisvitsa kuzana ramakore XVIII uye inotiudza iyo nyaya ye Carina anobva kuUlloaane hupenyu hunozochinja kana agamuchira tsamba. Baba vake, mufambisi wechikepe kubva ku Royal Navy yakatemerwa Viceroyalty yeNew Granada, inomubvunza kuti asangane naye mukati Cartagena deIndias. Pane vakamumirira fortuna muminda yecacao uye a anokudzwa buruka kuti roora ani. Asi pakusvika vanomuudza kuti baba vake vaive akapondwa uye chikomba chake chakaroora mumwe.
Carina anozobva awana iyo bhizinesi rababa vake rine mumvuri uye kubiridzira zvakapararira izvo zviripo. Zvakare mamiriro ekunze e hondo iyo inogara muCaribbean yese pakati peSpain neEngland. Uye iwe zvakare uchawana stepister mulatto akadzingirirwa na Bvunzurudzo. Ipapo Carina achasangana Diego de Veranz, anerocrocrat akadzingwa muguta achipomerwa mhosva. Asi De Veranz, chaizvo, shanda muchihwande yekorona uye ichada kumubatsira. Vaviri vanotsvaga kutsiva, asi havafano fanoona. kuda.
Yakatumirwa mukati 2016 ndechimwe nhoroondo yenhau yakavakirwa zvinoenderana nezviitiko chaizvo uye zvinotitora kuenda ku1608. Kudzoka kwemusikana anonetsa ku Zugarramurdi inokonzera nhevedzano yezviitiko zvinotungamira kune iyo kuenderera mberi nekutongwa kwehuroyi yenhoroondo uye mumutongo unoshamisa waivapo.
Pane zvese: covensvagari vemumusha vakashinga bonfires kutsemuka, mitezo, tsika dzechihedheni, varoyi, kudzinga mweya, mapoka, mashiripiti, mashura, vatambudzi, mirairo akanaka, anopenya magweta… Uye nhoroondo ye rudo rwakarambidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Mabhuku matanhatu nevanyori kubva kuReal Sitio uye Villa de Aranjuez. 6st kuburitsa.
JC Farramuntana akadaro
Kunyangwe dai chete nekuda kwekuzvida 😉 Ini ndaizowedzera Farramuntana, uyo akaburitsa mabhuku maviri mugore rapfuura: Ribereños naMestizo hope. Inowanikwa kuAranjuez Bookstore.
Pindura JC Farramuntana